Harargee Lixaatti Ajjeefamuu Gaggeessaa Amantii fi Rakkoo Nageenyaa Ture
Faayilii - Masjiida, magaala Harar
Harargee Lixaa Aanaa Odaa Bultumitti Sanbata darbe, gaggessaan masjiida magaalaa Baddeessaa ganda 01 ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru.
Harargee Lixaa Aanaa Odaa Bultumitti sanbata darbe, gaggessaan masjiida magaalaa Baddeessaa ganda 01 ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Sheek Abdallaa Mohaammed ka ajjeefaman mucaa ganan 13 ka mormii duraan Odaa bultumitti ta’e irratti ajjeefameef sirna awwaalaa gaggeeffamaa turerratti ta’uu jiraataan magaalaa Baddeessaa ni dubbatu.
Jiraataan kun Sheek Abdallaa duuka bakka awwaalaatti jeequmsi yeroo ka’ee utuu baqatanii isaan biraa ‘rasaasa humnoota nageenyaan rukutamanii du’uu’ himan. Nami kaan biro yeroo kana rukutames gara mana yaalaa geeffameera jedhan dabalanii yoo dubbatan.
Jiraataan Magaalaa Baddeessa kun dabalanii, qaamoleen nageenyaa yeroo kana tarkaanfii hagas gahu fudhachuuf waanti isaan dirqisiisu hin jiru ture jedhu. Yeroo awwaalaa kanas qaama naga kabachiiftota mootummaa kana nurraa hiiqaa jennee jaarsoliillee itti erginee nuun dhagahuu didanii jedhu.
“Nuti nama nurraa du’e awwaallaa rakkoon hin jiruu deemaa jennee jaarrolee ergine sana didan, yoo deebinu dhukaasa banan achii boombiis darbatan” jedhu jiraataan kun. Jiraattonni magaalaa Baddeessaa sanbata darbe bakka taateen kun itti mudate turan, boombii darbatame jedhame kanaan nami akka hin miidhamnellee ifoomsanii jiru. Aadde Kariimaa Bayan haadha warraa Sheek Abdallaati, du’aatii abbaa warraa isaanii manatti akka dhagahan, abbaan warraa isaanii Sheek rasaasaan qoma bitaarra rasaasaan akka rukutamanii battalumatti lubbunsaa darbe jedhan. “Inni (Sheek Abdallaa) n nama siyaasaa miti, nama nagaa, imaama masjiidaati, ijoollee sadii qabna (dhiira lamaa fi dubra tokko), an hojii hin qabu nama na gargaaru hin beeku” Aadde Kariimaa Bayan – Haadha Warraa
Aadde kariimaan du’a abbaa warraa isaanii ilaalchisee anagwootni mootummaa homaa akka hin ibsineefis dubbatanii jiru.
Du’a Sheek Abdallaa ilaalchisee abbootiin amantaa Odaa Bultum jiran kaanis angawoota mootummaa ka Godina Harargee Lixaa fi Ka Aanaarra jiran duuka marachuus dubbataniiru. Miseensi gaggeessitoota amantaa Obbo Seeyfeddin angawoota Godina Harargee lixaa, Aanaa bultumii fi magaalaa Baddeessaa waliin haala itti Sheek Abdallaan itti awwaalaman, nageenyi akka itti bu’uu fi kaan mariyachuu himu. Gaggeessitoonni amantii angawootni tarkaanfii humnaa ol akka umattarratti hin fudhanne, ajjeechaan Sheek Adbadallaa Mohaammed akka qoratamu gaafanneerras jedhu Obbo Seeyfeddin.
Rakkoo nageenyaa Baddeessatti awwaala mucaa ganna 13 rratti sanabata darbe mudateen warri miidhaan irra gahe namoota shanii jedhu jiraattonni magaalichaa yoo dubbatan. Warreen kun martinuus yaala fayyaaf gara Hospitaala Ciroo deemuus himanii jiru. Waa’ee namoota yaalaaf gara Hospitaala Ciroo dhaqan ka VOA’f himan ogeessi fayyaa Hospitaalichaa tokko garuu, Sanbata darbe Baddeessaatii nami miidhaan irra gahee yaalaaf gara Hospitaala Ciroo dhufe nama tokko qofaadha jedhu. Dookterri kun dargaggoon taawumsasaarra rasaasaan rukutame Hospitaalichatti yaala argachuu eeranii innis amma haala fooyya’aarra jiraa jedhan.
Torbeen dura mormii naannoo keessa tureen garuu namootni 30’i gara hospitaala Ciroo akka dhufan isaan keessaas afur lubbuun darbuus achumaan dabalanii dubbatanii jiru.
Manni Marii Dhimma Islaamaa Oromiyaas dhimmi ajjeechaa Sheek Abdallaa Mohaammed akka quba qabu ibse. Sheek Hajii Ibraahim Tufaa Itti Aanaa Pirezdentii Mana Marii Dhimma Islaamummaa Oromiyaati. Miidhaan gaggeessitoota amantichaarra gahaa jiru kun ka jalqabaa miti jedhu.
Sheek Hajii Ibraahim Tufaa, dhiyeenya kana qofaa, Hasaasa, Shaashamannee, Kofalee, ammammoo Baddeessaarratti gaggeessitoonni amantichaa miidhaan irratti dhaqqabeera jedhu. Sheek Haj Ibraahim humna ta’ee kana duuba jiru kana jechuun himuu baatanus, ‘dhiyeenya tarkaanfiin gaggeessitoota amantichaarraa gahaa jiru yaaddessaa dha’ jedhan. Kanaaf dhimma kanarrattis Manni Marii Dhimma Islaamaa angawoota mootummaa waliin marii gaggeessuu himanii, deebii eegaa akka jiran ifoomsan.
Waa’ee ajjeefamuu Sheeyk Abdallaa Mohaammed Bulchiinsi godina Harargee Lixaa, Bulchiinsi Aanaa Odaa Bultum fi Ka magaalaa Baddeessaa Deebii akka kennaniif guyyoota sadan darban guutuu deddeebiin gaafannus angawa dhimma kanarratti yaada kennuuf fedha qabu argachuu hin dandeenye. Ajajaan poolisii Magaalaa Baddeessaa komaander Kaasahun garuu; rakkoon Baddeessatti mullates, nami du’es hin jiru jechuun haalan.
Obbo Jibriil Mohaammed Hoogganaan Biiroo bulchiinsaa fi Dhimma nageenyaa Oromiyaa garuu Waan Komaander Kaasahun dubbatan faallaa himu. Obbo Jibriil, sanbata darbe, magaalaa Baddeessaatti awwaalarratti rakkoon uumame jiraachuu himanii nami ajjeefame jedhame Sheek Abdallaan garuu ‘Magaalaa keessatti utuu walitti bu’iinsa jiraattota fi humnoota nageenyaa gidduutti qindeessuu tarkaanfii fudhatameen lubbuun darbe’ jedhan. Dabalaniis angawi nageenyaa Oromiyaa kun ‘nami kun gatii gaggeessaa amantii ta’eef tarkaanfiin kan irratti fudhatame miti; kun akkasitti hubatamuu qaba’ jechuun himan.
Obbo Jibriil Awwaala magaalaa Baddeessaarratti waa’ee boombiin darbatamuu yoo ibsan, warri awwaala kanarratti hirmaatanii turan balaa lubbuu namaa kaan baasu uumuuf waan ammas tattaafataa turaniif, humnootni nageenyaa tarkaanfii miidhaa gahuuf ture hambisu fudhachuun sirrii ture jedhan.
Sanbata awwaalarratti ka ajjeefaman Sheek Abdellaa Mohaammed wixata darbe kana sirni awwaala isaanii Baddeessatti gaggeeffamee jira.
Yunivarsiitiin Wallaggaa Mana-barnootaa Bultii Addaa Barattoota Ciccimoo Itti Simatu Banuuf Jedha
Humnaa fi Hidhaan Rakkoon Siyaasaa Hin Furuu: KFO
Maayik Pompeyoo Imaltuu Itti Fufanii Jiru
Kutaa Wiskaansan Keessatti Mormii Gaggeeffameen Namnii Lama Ajjeefamuu Polisiin Ibsee Jira.
Korri Ripaablikaanootaa Kan Guyyaa 3ffaa Har'a Itti Fuufa
Fageenya Eeggachuu Dhabuun Tamsa’ina COVID 19 Babal’ise: MFI
Baqattoonni Itoophiyaa Masrii Keessatti Loogiif Saaxilamne Jedhan